Nagu saabsan - Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Dhismaha Qalabka Co., Ltd.
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Dhismaha Qalabka Co., Ltd.,kaas oo la aasaasay 2004, waa soo saaraha gaarka ah ee darbiga PVC iyo darbiyada saqafka, wax taaj oo kale PVC, PVC / WPC profiles iyo PVC / WPC decking dibadda, taas oo waafaqsan ilaalinta deegaanka. Warshaddeenu waxay ku taal meel u dhow muuqaalka quruxda badan ee Mogan Mountain ee Wukang, Deqing, Gobolka Zhejiang. Waxaa jira 45 kiiloomitir oo u jirta Galbeedka Harada ee Hangzhou iyo 160 kiiloomitir oo u jirta magaalada Metropolitan-Shanghai. Marka gaadiidka aaggaani waa midka ugu habboon.
Waxaan haynaa in ka badan 30 injineero iyo farsamo yaqaanno ah oo ku takhasusay soo saarista alaab cusub. Wax soo saarkayagu waa ku qanci karaa codsiyada macaamiisha. Dhammaan noocyada noocyada, qaababka & midabada aan soo saarnay ayaa hoggaaminaya moodada berrinka qurxinta Shiinaha. Waxaan leenahay in ka badan 140 dukaan silsilad ah waxaanna ku leenahay dhowr shati Shiinaha. Alaabtayada waxaa laga heli karaa adduunka oo idil sida Yurub, Bariga Dhexe, Aasiya iyo Ameerika.
Haddii aad xiiseyneyso mid ka mid ah alaabteenna, fadlan si xor ah u nala soo xiriir wixii macluumaad dheeraad ah Waxaan rajeyneynaa inaan xiriir ganacsi la yeelano macaamiisha adduunka oo idil!
Qaybta ugu horreysa ee PVC Panel oo leh nooca Huazhijie ayaa dhalatay, taas oo buuxisa suuqa faaruqa ah ee suuqa oo tayo sare leh Shiinaha.
Deqing Huazhijie Qurxinta wax co., LTD. la aasaasay.
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Dhismaha Qalabka Co., Ltd. la aasaasay. Ujeeddadiisu tahay ballaarinta iyo kor u qaadista tikniyoolajiyadda PVC iyo WPC Foam oo leh sumadda Huaxiajie.
Aqoon isweydaarsiga No.2 ayaa la galiyay wax soo saar. Aagga aqoon isweydaarsiga wuxuu gaadhay 30000 mitir murabac gebi ahaanba.
Helay shahaadada ISO9001: 2000 oo ay soo saartay SGS.
Aqoon isweydaarsiga No.3 ayaa la galiyay wax soo saar. Aagga aqoon isweydaarsigu wuxuu gaadhay 40000 mitir murabac oo gebi ahaanba ah.
Helay shahaadada CE.
Hogaamiyaasha Gudiga Xisbiga Deqing County iyo Dowlada Deegaanka waxay booqdaan Company-ga Huaxiajie waxayna cadeeyeen inay dhiiri galinayaan ayna taageerayaan hormarinta shirkadeena Huaxiajie.
Huaxiajie wuxuu ka qayb galaa shirkii 11aad ee Aasiya iyo Baasifiga.
Huaxiajie waxay ku guuleysataa Shiinaha Top Ten Integrated saqafka Brand.
Shirkadeena ayaa iska laheyd khadadka wax soosaarka horumarsan ee Jarmalka iyo Talyaaniga, wadarta guud ee sanadlaha ah ee ka badan 5 milyan oo mitir murabac ah darbiga PVC iyo darbiyada saqafka, in ka badan 6,000MT waxyaabaha xumbada PVC, iyo in ka badan 2,000MT waxyaabaha kale ee PVC. Wax soo saarkayagu waxay leeyihiin faa'iidooyin muuqda oo xoog badan, caddayn qudhun ah, dabka, caddaynta qoyan, caabbinta saamaynta, caabbinta dhawaaqa, rakibidda fudud, iyo dayactirka fudud iyo wixii la mid ah. Waxaa loo isticmaali karaa in ka badan 30 sano bilaa gabow ama hoos u dhac wuxuuna leeyahay noocyo kaladuwan oo lagu dabaqi karo dhammaan noocyada hoteelada, dhismooyinka xafiisyada, isbitaalada, iskuulada, dhirta warshadaha, dhismooyinka ganacsiga, maqaayadaha iyo guryaha la dagan yahay sida qurxinta gudaha
6. Xaqiijiyay PI-ga oo Sameeyay Bixinta ，